पैसा सम्बन्धी विश्वविख्यात विज्ञहरूको महत्वपूर्ण भनाईहरू : आखीर के हो पैसा ? | सुदुरपश्चिम खबर
पैसा सम्बन्धी विश्वविख्यात विज्ञहरूको महत्वपूर्ण भनाईहरू : आखीर के हो पैसा ?
पैसालाई हामी वस्तु विनिमय गर्ने वस्तुको रुपमा बुझ्छौँ । कागज वा धातुलाई निश्चित आकारमा काटेर, रंग घोलेर, थरीथरीका बुट्टा भरेर, अमुक व्यक्तिको हातबाट दस्तखत गराएर कागजको मूल्य तय हुन्छ । त्यसले पैसाको रूप लिन्छ ।
हामी त्यसलाई पैसा भन्छौं । हामी ईश्वर मान्दैनौं, धर्म मान्दैनौं, राज्य मान्दैनौं, शासन व्यवस्था नमान्न सक्छौं, तर पैसाविना जीवन चल्दैन विश्वभरका मान्छेसँग मिल्ने एउटै लक्ष्य प्राप्ति भनेको पैसा हो । पैसाको सन्दर्भमा मानिसहरूको आआफ्नै धारणा भएको पाइन्छ । जसमध्ये हेर्नुस् केही विश्वविख्यात विज्ञहरुको पैसासम्बन्धी धारणा
म धनी मानिसभन्दा गरिब मानिस भएर बाँच्न चाहान्छु । – पाब्लो पिकासो,मुद्रा भएमा कागजको खोस्टामात्र खर्च हुन्छ तर समयको खर्च भएमा जीवनको भाग नै खत्तम हुन्छ ।( माइकल लिबोइक,मुद्रा आफैँ टाउको दुखाइ पनि हो र त्यस्को औषधी पनि ।( इमिरेट म्यामोर
जीवनमा आइपर्ने केही दुःखलाई राम्रो कमाइले पार लाउन सक्दैन । – लोगन पियरसल स्मिथ,पैसा दुईधारे तरबार हो, जसले भए पनि, नभए पनि मानिसलाई चोट दिइरहन्छ । – लेखनाथ पौडयाल,म प्रशस्तै पैसा भएको गरिब मानिसको जीवन बाँच्न चाहन्छु । – पाब्लो पिकासो
पैसालाई जति अङ्गालो हाल्छु भनेर लागे पनि यसले तपाईँको वास्ता गर्दैन । – अज्ञात,जीवनलाई डलरसँग तुलना गर्नु ठूलो भूल हो । – क्लिपफोर्ड ओडेट्स,पैसाको सवालमा सबै एक धर्मका अनुयायी बनिदिन्छन् । – भोल्तेयर
पैसालाई भगवान बनाइयो भने यसले हामीलाई दानव बनाइदिन्छ । – हेनरी फिल्डिङ,नारी नभएको भए पैसाको पनि कुनै अस्तित्व हुने थिएन । – एरिस्टोटल,शुद्ध निस्वार्थ प्रेम मन र निश्कलङ्क शुद्धिविना असम्भव र अप्राप्य छ । – महात्मा गान्धी
यो पनि पढ्नुहोस् ःजाडो मौसममा खानुहोस् यी खानेकुरा, जुन स्वास्थ्यको लागि छ अत्यन्त लाभदायक !!ःकेही खानेकरा जाडो मौसममा खानु स्वादको लागि मात्र नभई स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मानिन्छ। यी खानेकुरा खाली पेटमा खाँदा धेरै फाइदाहरू हुन्छन्।
बिहान खाली पेटमा यी खानेकुरा खाँदा अद्भूत स्वास्थ्य लाभहरू हुनसक्छ। सबैलाई थाहा छ कि हामीले बिहानको खाजामा पौष्टिक र प्रोटीनयुक्त चीज खानु पर्छ। जाडोमा स्वस्थ रहन र धेरै रोगहरुबाट बच्नको लागि खानाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
धेरै मानिसहरु जाडो मौसममा न्यानो चीजहरू खाँदा रमाउँछन्। चिसो मौसममा जहिले पनि तातो खाना खान्छन् । यस मौसममा फ्राइड चीजहरूको उपभोग पनि बढ्छ। जसको कारण पेटमा धेरै समस्याहरू हुन सक्छन्।
तेलमा फ्राई गरिएका खाना खानाले तौल बढाउँछ । जाडो मौसममा स्वस्थ रहन र तौल घटाउन, तपाईं आफ्नो आहारमा केही स्वस्थ खाना समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। ती खानेकुराहरु यस्ता छन् ः
भिजेको बदामःजाडो मौसममा खाली पेटमा बदाम खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ। बदाममा मैंगनीज, भिटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा–३ र ओमेगा–६ फ्याट्टी एसिड पाइन्छ। जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ।
भिजेको ओखरःओखर स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। यसले स्मरणशक्ति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। बदाम जस्तै ओखर भिजाउनु फाइदाजनक हुन सक्छ। बिहान खाली पेटमा भिजिएको ओखर खाने गर्नाले शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ।
जौःखाली पेटमा जौँको खाना खानाले शरीरमा उर्जा राख्छ। हिउँदको मौसममा जौ भन्दा राम्रो नास्ता अरू केहि बनाउन सक्दैन। जौँ मा क्यालोरी कम र पौष्टिक गुण उच्च हुन्छ। जसले तपाईंको तौल नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
मेवाःमेवा खानु तौल घटाउन र पेटको स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । बिहान खाली पेटमा मेवा खाँदा धेरै समस्याबाट बच्न सकिन्छ। तर जो मानिसलाई मेवा खाँदा एलर्जी हुन्छ उनीहरुलाई मेवा खानुहुँदैन ।
महःजाडो मौसममा, बिहान मनतातो पानीमा मह राखेर खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा हुन्छ। महलाई औषधीय गुणहरू सम्पन्न मानिन्छ । खनिज, भिटामिन, फ्लाभोनोइड र एन्जाइमहरू महमा प्रशस्त पाइन्छन्। जसले तपाईंको तौल घटाउन पनि मद्दत गर्दछ।यो सल्लाह योग्य चिकित्सा रायको विकल्प होईन। अधिक जानकारीको लागि सँधै विशेषज्ञ वा तपाईंको चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
दिव्य धाम असीमी केदारको दर्शन गरी हेर्नुहोस् , मिती २०७७ माघ २२ गते बिहीवारको राशिफल !
टन्सिल भएर परेसान हुनुहुन्छ ? घरमै गर्न सकिन्छ उपचार !